China Mba MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Bipute Liverpool Bullet Fabric Printing For Bow Textile Manufacturer and Supplier | Wenchang
Enweghị MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Bipụta Liverpool Bullet Fabric Printing For Bow Textile
Ihe Nke ： KWB-2125
Ihe ： 95% Polyester 5% Spandex
Ngwaahịa ngwaahịa Mgbo akwa
Nkebi NO KWB-2125
Ihe onwunwe 95% Polyester 5% Spandex
Ibu ibu 230GSM
Njirimara Ngwa ngwa akọrọ / gbatịa / breathable / Wicking
Jiri Bmụaka owsta / Uwe / Akpa
Monochrome jacquard bụ a jacquard dyed ákwà-na jacquard isi awọ ákwà na-kpara a jacquard ekwe na mgbe e sijiri na rụchaa. Ngwurugwu a rụchara bụ agba siri ike; Multi-color jacquard bụ yarn-jacquard jacquard fabric-dyed wee kpara ya site na jacquard loom The yarn-dyed jacquard fabric has more than two colors, the fabric is rich in color, doesn't appear monotonous, ụkpụrụ ahụ nwere ike atọ -nmetụta mmetụta, na ọkwa dị elu. Obosara nke akwa ahụ adịghị ejedebe, na akwa ahụ dị ọcha na-ebelata ntakịrị, ọ naghị agba bọọlụ, ọ naghịkwa ada. A na-ejikarị akwa Jacquard mee ihe maka akwa akwa na nke dị n'etiti ma ọ bụ ihe eji eme ihe na ụlọ ọrụ ịchọ mma (dịka ákwà ngebichi, ihe sofa). Usoro n'ichepụta akwa jacquard akwa dị mgbagwoju anya. A na-ejikọta yarn na akwa yarn na ibe ya na mgbada, na-akpụ usoro dị iche iche, na concavities na convexities, na ụdị mara mma ndị ọzọ dịka okooko osisi, nnụnụ, azụ, ụmụ ahụhụ, nnụnụ na anụ ọhịa na-akpa.
Texturedị ahụ dị nro, dị nro ma na-amị amị na ọdịdị pụrụ iche, ezigbo gloss, drape dị mma na ikuku ikuku, yana agba agba dị elu (yarn dyeing). Patternkpụrụ nke akwa jacquard ahụ buru ibu ma na-atọ ụtọ, na agba ndị dị iche na akụkụ atọ, ebe ụkpụrụ nke obere akwa jacquard ahụ dịtụ mfe na otu.
Jacquard ákwà (6 Ibé akwụkwọ)
Satin jacquard akwa (akwa): agha na weft na-agbakwunye ma ọ dịkarịa ala otu ugboro na yarn atọ ọ bụla, ya mere satin weave na-eme ka njupụta akwa dị elu, ya mere, akwa ahụ buru ibu. Satin ikpa na ngwaahịa ndị dị oké ọnụ karịa yiri larịị ikpa na twill ikpa ngwaahịa. A na-akpọkọta akwa ndị ejiri akwa satin kpaa dịka satin. Uwe Satin nwere ihu na azụ n'akụkụ. Ihe ndị a na-adọkpụ na ntanetị zuru oke bụ nke pere mpe, ma na-ese n'elu mmiri bụ nke kachasị ogologo. Elu nke akwa ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mejupụtara na-ese n'elu mmiri ma ọ bụ na-agagharị. Ọdịdị nke akwa satin ahụ dị nro. Satin akwa nwere ihu na azụ, akụkụ akwa ahụ dịkwa mma, dị mma ma na-egbu maramara. A na-eji akwa satin akwa akwa satin, nke a na-akpọ satin. Ekere ya uzo abuo: akwa 40 satin nke 2 mita 4 obosara na 60 satin nke 2 mita 8 obosara. Mbụ ịkpa ákwà na mgbe e ji esiji ákwà usoro, nke a na ụdị akwa bụ n'ozuzu siri ike na agba, na kehoraizin warara ndọtị. Ngwongwo a na-acha ọcha nke dị ntakịrị na-ebelata ntakịrị, anaghị eme bọọlụ, ọ dịghịkwa mfe ịda.
Satin jacquard ákwà (akwa)
Ihe omuma nke "Satin Jacquard Fabric".
Ugboro abụọ: A na-etinye ogologo ogologo na ahịhịa ahụ ọ dịkarịa ala otu ugboro na yarn abụọ ọ bụla, ya bụ, 2 elu na 1 ala ma ọ bụ 3 elu na 1 ala. Na-agbakwụnye isi ogologo na isi nke ihe na-agbanwe agbanwe iji gbanwee usoro nke akwa ahụ, nke a na-akpọkarị twill fabric. Ihe e ji mara ụdị akwa a bụ na ọ dị oke oke ma nwee mmetụta siri ike nke usoro akụkụ atọ. Ọ bụ alaka 30, alaka 40, na alaka 60.
Satin akwa: A na-ejikọta akwa na akwa akwa otu ugboro ma ọ dịkarịa ala yarn atọ, ya mere akwa satin ahụ na-eme ka akwa ahụ jupụta, ya mere akwa ahụ buru ibu. Satin kpaa ngwaahịa ndị dị oké ọnụ karịa yiri larịị ikpa na twill ikpa ngwaahịa, na-akpa akwa bụ ezigbo, mma na nke onwunwu. Plain ikpa, twill weave, na satin weave bụ ụzọ isi atọ dị ogologo na ụzọ ịkpa akwa. O nweghi ihe doro anya di iche n’etiti ezi ihe na ihe ọjọ. Onye ọ bụla nwere àgwà nke ya. N'ime ha, satin ga-abụrịrị nke kachasị mma nke akwa owu.
Nke gara aga: Ndenye Ihicha Jacquard Mesh 84% Naịlọn 16% Spandex Knitting Fabric for Shirt / Sportwear / Coat
Omenala Printing Fabric
Printing N'ihi Bowta Textile